Dastabej » संक्रमितकै ट्रेसिङ छैन, परिवारै संक्रमित
संक्रमितकै ट्रेसिङ छैन, परिवारै संक्रमित – Dastabej
संक्रमितकै ट्रेसिङ छैन, परिवारै संक्रमित
कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रणमा चुनौती
नेपालगन्ज । नेपालगन्जमा शनिबार ६ सय २४ जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा ४ सय ३१ जनामा संक्रमण पुष्टि भयो । शुक्रबार ५ सय ८४ जनाको परीक्षण गर्दा ३ सय ४२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । संक्रमितको यो अभिलेख ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ का आधारमा होइन । यी व्यक्ति स्वस्फूर्त परीक्षण गराउन आएका हुन् । भेरी, नेपालगन्ज शिक्षण अस्पताल र बागेश्वरी ल्याबमा स्वस्फूर्त कोरोना परीक्षण गर्न जाने बढेका छन् । समुदायमा ‘केस इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ रोकिएको छ । कोरोना पुष्टि भइसकेका व्यक्तिको परिवारका सदस्यको समेत ट्रेसिङ गरिँदैन । जसले संक्रमण नियन्त्रणमा चुनौती छ । निषेधाज्ञा जारी गरेको एक महिना भए पनि संक्रमण नियन्त्रणमा छैन । चिकित्सक भने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नगरेसम्म नियन्त्रण नहुने बताउँछन् । ‘दुई/चार महिना कोरोनाको संक्रमण बढेजस्तो, कहिले घटेजस्तो देखिए पनि समुदायस्तरबाटै नियन्त्रण गर्न केस इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ अनिवार्य हुन्छ । त्यो नगर्दासम्म सम्भव देखिन्न,’ भेरी अस्पतालका डा. राजन पाण्डेले भने, ‘समयमै ट्रेसिङ गर्न नसक्दा यो अवस्था आएको हो ।’
संक्रमित पुष्टि भइसकेका व्यक्तिका परिवारको समेत ट्रेसिङ हुन नसकेको उनले बताए । ‘एकै दिन हजार जना बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ । उनीहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने हो भने लाखौंको परीक्षण गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
बाँकेमा दैनिक सयौं व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि हुने गरेकाले ट्रेसिङ सम्भव हुन नसकेको हो । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका जनस्वास्थ्य अधिकृत नरेश श्रेष्ठले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पूर्ण रूपमा बन्द भएको बताए । उनले संक्रमित व्यक्तिका परिवारमै ट्रेसिङ गर्न नसकिएको स्विकारे । ‘समुदायमा ट्रेसिङको कुरै नगर्नूस् । कोरोना पुष्टि भएका व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेकाहरूको पनि परीक्षण गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘घरघरमा कोरोनाको संक्रमण पुगिसक्यो । ट्रेसिङ गरेर परीक्षण गर्न सम्भव छैन ।’ पहिलो चरणको संक्रमण देखिँदा नेपालगन्जको जोलहनपुरवार र नरैनापुर गाउँपालिका हटस्पट बनेको थियो । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरी परीक्षण गरेपछि कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रणमा आएको थियो । बाँकेका ८ स्थानीय सरकारहरूले पनि समुदायमा परीक्षण गर्न सकेका छैनन् ।
१० जेष्ठ २०७८, सोमबार ११:४८ प्रकाशित
१३७ किमी सडकको ट्र्याक तयार
लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि बृहत् यौनिकता शिक्षा
हामीलाई आर्थिक स्रोतभन्दा समयको अधिक महत्व छ : ऊर्जा मन्त्री भुसाल
बडादसैँका साइत सार्वजनिक, विजयादशमी असोज २९ गते १०ः०२ बजे शुभ
नारायणहिटी संग्रहालयबाट श्रीपेच चोर्न खोज्ने पक्राउ
१.	गैडाकोट दुर्घटनाः बर्दिया बाँसगढीका एक दम्पत्तीका श्रीमतिको मृत्यु, श्रीमान गम्भीर, यस्तो छ घाईतेको नाम र स्वास्थ्य अवस्था
२.	कर्मचारीकै मिलोमतोमा नेपालगन्ज भन्सारमा राजस्व छलीः ७ हजार पर्ने समानको मुल्य १००, कारवाहीबाट जोगिन अर्थ मन्त्रालयसम्म दौडधुप
३.	नेपालगन्जस्थित ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सका एरिया सेल्स म्यानेजर माझीले गरे ‘बलात्कार’को प्रयास, मुद्दा चल्यो अभद्र व्यवहार
४.	”मृत शिशु साटिएको” भन्दै भेरी अस्पतालमा रातभरी विवाद, आज छलफल हुँदै
५.	बर्खामा किरननालाको किन भत्काइयो पुल ? गाडी चल्न बन्द, स्थानीयलाई सास्ती
६.	सावधान, बाँकेको पुर्बी गाभरमा मंगलबार पनि देखियो बाघ
७.	अब नेपालगन्जमा पनि डान्स बार र मसाज पार्लर